Top Benefits Winstrol 15 Izay Ilainao Fantarina Alohan'ny Buy Winstrol Online
/Blog/Gallery/Top Benefits Winstrol 15 Izay Ilainao Fantatra Alohan'ny Buy Winstrol Online
Posted on 01 / 17 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
Ny zava-drehetra momba an'i Winstrol
1. Inona ny Winstrol? 2. Ahoana no i Workstrol?
3. Top Benefits Winstrol 15 amin'ny fitomboan'ny taova 4. Winstrol Dosage
5. Winstrol Semi-Life 6. Winstrol Detection Time
9. Mandra-paharetana ve ny mijery ny vokatra Winstrol? 10. Common Winstrol Side Effects
11. Ahoana no hialana amin'ny vokatra Winstrol Side 12. Fanenjehana an'i Winstrol
13. Ahoana no hividianana Winstrol Online 14. Recipe for Winstrol Powder
Moa ve ny steroids anabolic ny zavatra azo antoka rehefa mikasa ny hikapa ny lanjan'ny vatanao ianao ary mitazona ny masin'ny muscle? Fantaro raha mendri-kaja amin'ny stanozolol (Winstrol) ny steroid, ny tombony ho an'ny steroids hafa, ary ny fomba buy winstrol.
Raha te-handoro fatin-doha ianao ary manana vatana mangatsiaka, azonao atao ny manofa toeram-pisakafoanana ary manao fiofanana hafa. Na izany aza dia mitaky fiaraha-miasa sy tsy tapaka izany. Ny fomba tokana azo antoka very lanja Mihamatotra haingana, ary manamafy orina ny tazomoka ny ankamaroany.
Tsy toy ny steroïde hafa izay manana fiantraikany eo amin'ny tombontsoa ny winstrol dia manana tombony maro ho an'ny mpampiasa. Ny zavatra iray hafa tokony ho fantatrao dia ny fampiasana fitsaboana hafa ihany koa.
1. Inona ny Winstrol?
Alohan'ny handehanana eto amin'ity pejy ity dia mety hisy fanontaniana maro mifandraika amin'ny hoe, "Inona no winstrol ary inona no ataony?" Ity lahatsoratra ity dia haharihary mihoatra noho izay tianao ho fantatra.
Winstrol na Stanozolol dia a steroids synthetic miaraka amin'ny toetra anabolika sy androgenic. Amin'ny endrika manginy, io fitambaran'ny solika io dia mitondra ny CAS hoe. 10418-03-8. Stanozolol dia avy amin'ny dihydrotestosterone (DHT). Ny fizotry ny fanabeazana dia midika fa ny fifehezana ny 3-keto-aldehydan'ny oxymetholone amin'ny hydrazine.
Ny Winstrol dia azo ampiasaina ho toy ny rongony na zava-mahadomelina tsy azo ampiasaina. Izy io dia miasa amin'ny fanombohana ny famarotana proteinina sy ny fitomboan'ny fitomboan'ny taova. Ankoatr'izay, ny ankamaroan'ny olona dia mitazona azy mandritra ny dingana famaranana mba hahatratrarana saka nofoanana saingy masculine. Voarara ny zava-mahadomelina any amin'ny ankamaroan'ny firenena, ka ny USA FDA dia namorona azy ho toy ny sokajy III.
Na dia eo aza ny fampisehoana ny toetra anabolika, winstrol koa dia manana fampiasana ara-pahasalamana sasany. Ohatra, izy io dia afaka manalefaka ny aretina azo avy amin'ny aretina, manentana ny famokarana hemoglobine, ary amin'ny fitsaboana angioedema. Na dia misy aza ny stanozolol amin'ny dokotera tena izy, dia mbola afaka mahita ianao Winstrol for sale ao amin'ny magazay maro.
Io fanafody io dia fahatelo anabolika raha oharina amin'ny testosterone. Ny stionzolôl dia C17-alpha alkylated steroid, ny stanazolol dia manana rafitra tokana miavaka vokatry ny fanovana ny hormone dihydrotestosterone. Noho izany antony izany dia ny 10x anabolika noho ny androgenic.
Andriamatoa Tononkalo 30 100
Winstrol dia tonga voalohany tamin'ny 1959. Ny Winthrop Labs dia nanamboatra azy io amin'ny tanjona amin'ny fitsaboana ny toe-pahasalaman'ny venezo sy terminal. Ny fitehirizana ny azotany azon'ilay zava-mahadomelina dia mahatonga azy io ho fanafody mety ho an'ny fahasimban'ny tosidra. Tamin'ny 1962, efa nahazo ny fankatoavan'ny Fikarakarana ny sakafo sy ny fanafody (FDA) izy io.
Ny nahatonga an'i Winstrol malaza dia ny adihevitra momba ny doping nandritra ny Olympika 1980. Hanazava aho. Tao amin'ny atletan'ny 1988, nandresy medaly volamena i Ben Johnson rehefa nandray anjara tamin'ny hazakazaka 100M izy. Nametraka rakitsoratra vaovao izy tamin'ny fanesoana ny Olympiana Amerikana miavaka, Carl Lewis.
Na dia mpandresy mpandresy fanta-daza aza i Johnson, dia voatery nampiasa an'i Stanozolol mba hampitombo ny asany i Johnson. Noho izany, nesorin'ny manampahefana ny medaly ary dia nampiato azy tamin'ny Olympika.
Taorian'izany dia hita fa nahomby ilay steroide anabolic, ny atleta maro dia nanaraka ny baolina rehefa nandrakitra izany ho fanatanjahan-tena. Na izany aza dia nidina mafy tamin'ny fampiasana steroïde ny governemanta amerikana. Vokatr'izany dia nihamafy ny lalàna mifehy ny famokarana, fampiasana ary fivarotana ireo fanampiana ireo.
Anarana Brand Winstrol
Mariho fa ny endrika mahazatra ho an'io fanafody io dia akora simika kristaly tsy fotsy. Ny ankamaroan'ny olona dia mahita ny winstrol parrot taste to be strong.
2. Ahoana no i Workstrol?
Winstrol dia steroid heterocyclic miaraka amin'ny fifandraisana matanjaka ho an'ny mpanaraka ny androgen. Tsy vitan'ny manamboatra proteinina fotsiny izy io fa manatsara ny fananganana kolagna. Ny fanafody dia manalefaka ny anabolisman'ny proteinina ka mamadika ny asa ataon'izy ireo.
Izany dia mampidina ny Hormone Sex Binding Globulin (SHBG), noho izany, mahatonga ny fitomboan'ny testosterone maimaim-poana. Avy eo, ny vatanao dia mihevitra ny fananana anabolic.
Ny fiantraikan'ny tsimokaretina anabolika amabolika indrindra dia ny toetran'ny estrogenic. Na izany aza, ny winstrol dia tsy hitsambikina velively amin'ny estrogen. Ny antony nahatonga ny A-ring izay nanolo ny vondrona 3-keto, izay manome ny zava-mahadomelina steroide.
Ny fisian'ny methyl group ao amin'ny firafiny dia mampitombo ny fivoaran'ny stanzaolol ao amin'ny vatana. Ny vokatra winstrol dia ho hita eo amin'ny andro 14.
3. Top Benefits Winstrol 15 amin'ny Bodybuilding
Raha te-handray tombony amin'ny winstrol ianao, dia tokony hampiditra azy io amin'ny fanatanjahan-tena tsy tapaka fitondrana ary sakafo ara-pahasalamana. Ao anatin'izany ny fahasamihafan'ny vatantsika amin'ny hetsika fanaovan-tsakafo sy ny fihetsiketsehana, ny fanarahana ny ordinatera sy ny fihazonana paikady fohy dia hamonjy anao amin'ny vokatra hafa.
Winstrol tombony 1: Zero loza vokatry ny aromatisma
Inona no mahatonga an'i Winstrol hijoro eo anivon'ireo steroids hafa anabolika rehetra, dia ny hoe tsy manova azy amin'ny estrogen izany. Ho an'ireo mpampiasa lahy, ity no singa tena manan-danja indrindra azonao atao amin'ny fitadiavana zava-mahadomelina.
Avelao aho hanazava. Indraindray ao anaty vatana dia mitarika ho lasa estrogen ny steroïde. Ny voka-dratsin'ny estrogenika dia tsy ho mahafinaritra indrindra raha tsy maintsy miara-mipetraka amin'ny nono trondro ianao, izay ny olon-tsotra dia ho faly amin'ny fananana.
Raha misy zavatra izay hamela anao amin'ny raharaha mahadomelina momba ny zero loza amin'ny aromazina, dia winstrol vs anavar ranon-tsarinao. Ireo steroides roa ireo dia tsy mampiseho ny fiantraikan'ny domino amin'ny fiovan'ny estrogen na ny fihazonana rano.
Winstrol tombony 2: Muscle Gain
Winstrol dia manao ny anjara asany amin'ny fampiakarana ny anabolisman'ny proteinina. Izy io dia mahatonga ny sela hozatra hamokatra sy hitazona proteinina betsaka araka izay vitany, noho izany, mampitombo ny hery sy ny hery. Noho ny fitomboan'ny dingana metabolika, ny vatana dia mamokatra adenotriphosphate fanampiny, izay mitondra ny anjara andraikitra lehibe amin'ny fanorenana hozatra.
Tano ny stanozolol miaraka amin'ny steroide Deca sy ny fiasan-tsakafo vitsivitsy, ary hanana ny winstrol mialoha sy aorian'ny valim-pifidianana.
Benefit Winstrol 3: Hery sy fiaretana
Ny bodybuilder matihanina rehetra dia hanamafy sy hanamarina fa tsy misy ilàna azy ny steroid, izay mampitombo ny masin'ny muscle amin'ny fanamafisana ny fiaretanao.
Koa, ahoana no hanatsarana ny tanjaka ny stanozolol? Avelao aho hanazava. Ny fanafody dia mampivelatra ny famokarana sela mena ao amin'ny vatanao. Satria ireo sela ireo no tompon'andraikitra amin'ny fitondrana oksizenina, dia mahazo oksizenina ampy ihany koa ny hozakaina mba hiaretana fotoana maharitra kokoa.
Noho ny fepetra fanakanana cortisol, ny winstrol dia hanatsara ny fizotran'ny fanarenana ary hisorohana ny fihenjanana na ny fahaketrahana. Izany no antony mahatonga ireo mpampiasa mandray anjara amin'ny fanatanjahantena fifaninanana tahaka ny lalao bisikileta na fifaninanana, mitahiry vola amin'ny steroids hampiroboroboana ny asany.
Benefit Winstrol 4: Cyber ​​Cycle
Ny dokotera dia mety hitandrina winstrol amin'ny marary izay sarotra aminy ny mahazo na mitazona ny lanjany ara-dalàna. Na izany aza, tsy izany no tanjona tiako hapetraka.
Ny vavy dia efa nomena torohevitra mba hivoatra amin'ny steroids anabolic noho ny mety sy ny androgenic effects. Etsy ankilany, misy ny vaovao mahafaly misy ny fandrosoana amin'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny indostrian'ny bozaka. Winstrol ho an'ny vehivavy dia azo antoka fa hampitombo ny hozatry ny fo mitresaka amin'ny tsy fahamendrehan'ny volo vatana, taolam-paty lava, na fikolokoloana lalina.
Benefit Winstrol 5: Ny voka-dratsin'ny otrikaretina mampidi-doza
Winstrol dia anisan'ireo steroids anabolic vitsivitsy izay manana tsindry androgenic low-slung. Noho izany, ny mpampiasa lahy sy vavy dia tsy dia mahatsapa loatra ny fahaverezan'ny volo na ny akne.
Na izany aza, tsy midika izany fa tsy misy fiarovana tanteraka avy amin'ireo akon'ny trangan-tsolika winstrol. Avelao aho hamela hazavana kely eto. Ny olona sasany dia mety ho azo tsapain-tanana amin'ny fiovan'ny androgenic na dia kely aza. Raha tsy tafiditra ao anatin'ity sokajy ity ianao dia hiseho tsara ho anao ny zava-mahadomelina.
Benefit Winstrol 6: Lean Appearance (Cutting Cycle)
Ny ankamaroan'ny steroids anabolic dia miteraka voka-dratsiny amin'ny fatran'ny sarontan'aretina vatana. Raha mpiangona bodista ianao na atleta fifaninanana, dia mety hanelingelina ny fahombiazanao amin'ny fifaninanana ny fipoahana lehibe.
Ny zavatra tsara indrindra momba ny winstrol dia ny manampy ny mpampiasa hitazona ny hozatry ny foza ihany. Izany no antony ampiasana ny zava-mahadomelina ao amin'ny dingana fanarenana mba hampihenana ny vatana ao anaty fefy. Club winstrol miaraka amin'ny Primobolan ary hanana endrika sarotra amin'ny fijery ivelany.
Benefit Winstrol 7: Tsy misy fitehirizana rano
Ny hormonina andoôsiana hita ao amin'ny steroids anabolic no antony voalohany amin'ny fitehirizana ny natiora, noho izany, ny fironan'ny vatana hitazona rano. Ny fanafody bebe kokoa amin'ny zava-mahadomelina dia ny rano bebe kokoa hitazona ny vatanao. Ankoatra izany, io fiantraikany io dia mifamatotra amin'ny fisamborana sy ny fihanaky ny homamiadana.
Hatramin'izao, misy ihany ny steroïde telo manana toetra miafina. Ireo no stanozolol, anavar, ary trenbolone. Raha toa ianao ka hampitaha ny tombotsoan'ny Winstrol vs anavar, dia ho hitanao fa samy manana fiantraikany amin'ny vatany ny tsirairay. Na izany aza dia hanampy anao hahazo ny hozatra kokoa kokoa noho ny an'ny steroids telo hafa i Winny.
Benefit Winstrol 8: Fitsaboana ara-pahasalamana
Ny atidoha ao Winstrol dia namolavola ny steroid amin'ny fikasana ny hitsabo ny fahasalamana. Ny fampiasana voalohany ny fitsaboana stanozolol dia amin'ny fitsaboana angioedema, izay miteraka ny fihodinan'ny tarehy, tenda, na ny fiterahana.
Ny fepetra hafa izay hampiditra anao amin'ny prescription winstol dia ahitana ny fiteraham-boankazo, ny tsy fahampian-tsakafo, ny osteoporose, ny fihenan'ny fibrinolytika, na ny tsy fahampian-tsakafo. Ankoatr'izany, ny steroid dia fitaovana faran'izay haingana ho an'ny aretina voafaritra manokana, izay tsy azo atao afa-tsy amin'ny famerenana indray ny fizotry ny disadisa.
Nolazaiko ve fa ny winstrol dia mitombo avo roa heny noho ny steroid olombelona sy biby? Ankehitriny fantatrao! Na dia eo aza ny fanamafisana ny zava-bitan'ireo biby mandray anjara amin'ny fifaninanana tahaka ny fifaninanana fifaninanana dia Winny koa dia zava-mahadomelina. Mampirisika ny fitomboan'ny ombilahy izany ary miteraka aretina faran'izay mahasalama amin'ny saka sy alika.
Benefit Winstrol 9: Tsara ho an'ny steroid stacking
Na dia misy karazany hafa aza anabolic steroids, tsy azonao hakana azy ireo toy ny vatomamy. Ny voka-dratsin'ny steroid dia manome antoka ny vokatra tsara. Na izany aza, tonga ny olana rehefa tsy maintsy mamantatra hoe inona avy amin'ny famenoana dia mifangaro tsara amin'ny iray hafa, ary ny fomba tsara indrindra azonao ampiasaina sy mifanandrify amin'izy ireo.
Avelao aho hanazava ny antony tokony hisakananao Winstrol amin'ny zava-mahadomelina hafa.
Ny ankamaroan'ny steroide anabolic dia hamehy ny vatana Hormone-Binding Globulin. Ny fifandraisana avo lenta amin'ny SHBG dia manala ny fihetsika amin'ny steroid amin'ny vatan'ny mpiserasera, noho izany, mahatonga ny zava-mahadomelina tsy misy ilàna azy.
Tsy mitovy amin'ny winstrol ilay raharaha satria mampidina ny haavon'ny SHBG ao amin'ny vatana. Noho izany, afaka mametaka azy amin'ny steroids maro ianao ary mbola mitazona ny hozatry ny fo sy ny endriny tsara tarehy. Ny kombina Winstrol mety amin'izany dia ahitana fonolòn, cardarine, Primobolan, andarine, anavar, or masteron.
Ny Testosterone dia tsara ihany koa amin'ny fametahana, fa ataovy izay hahazoana dipelina ambany raha tsy misy vokany arovana.
Benefit Winstrol 10: High Bioavailability
Ny fahafoizan'ny alikaola dia hamaritra ny heriny foana. Ho an'ny stanozolol, misy methyl group ao anatin'ny rafitra izay mahatonga azy io ho azo ampiasaina hatramin'ny ora 24. Io fanafody io dia afaka mandalo amin'ny aty nefa tsy mihena.
Benefit Winstrol 11: Fomba maro momba ny fitantanana
Azonao atao koa ny mandray orinasa winstrol amin'ny orinasa madinika na amin'ny alalan'ny fampidirana intramuscular. Ny voalohany dia omena indroa isan'andro satria ny antsasaky ny fiainana dia tokony ho sivy ora. Mifanohitra amin'izany, manana faratampony lava kokoa ny farany, noho izany, indray mandeha isan'andro.
Raha te handalo ny tatitra momba ny mpanjifa isika dia mino ny ankamaroan'ny mpampiasa fa ny vokatra tsara dia manome ny vokatra tsara indrindra. Na dia izany aza, ny zavatra iray izay hanosika azy ireo hitsangantsangana dia ny fampidirana fanaintainana, izay mitohy na dia aorian'ny fitantanana aza.
Tianao ve ny mandalo ny vokatry ny toaka? Amin'izay ianao dia tokony hametraka fa tsy hitelina ny pilina. Amin'ny alalan'ny fampidirana, winstrol dia hiditra mivantana ny rafi-pifamoivoizana mivantana tsy misy fandehan'ny aty.
Benefit Winstrol 12: Vitsy ny fiantraikany
Tahaka ny fanafody hafa rehetra, winstrol koa dia manana fiantraikany amin'ny vokatra hafa koa. Na izany aza, rehefa mifikitra amin'ny dosral nomena nomena anao ianao rehefa mihazona fe-potoana fohy, dia tsy hisy intsony ny vokany.
Ny aretin-tsaina mahatsiravina indrindra ataon'ny olona dia avy amin'ny hormones androgenic sy estrogenic. Amin'io tranga io, ny winstrol dia manana ny latsa-dranomaso faran'izay kely indrindra ary tsy misy afaka manova azy amin'ny estrogen. Noho izany, azo antoka ianao!
Benefit Winstrol 13: Ho an'ny vehivavy
Ny ankamaroan'ny steroide anabolic dia mifanohitra amin'ny vehivavy noho ny mety ho fisian'ny fanehoan-kevitra androgenic. Ny haavo amin'ny androgen avo dia hahatonga ny fahavoazan'ny volo amin'ny lehilahy, ny feo mihalalina ao amin'ny vehivavy, ary ny fiantraikany hafa mampihomehy izay tsy hirehareha.
Ny tranga dia tsy mitovy amin'ny stanozolol satria anisan'ireo steroids vitsivitsy izay ambany ambany ny valiny. Ny fampitahana haingana ny androgen sy ny anabolic ratios amin'io zava-mahadomelina io sy ny testosterone dia mitovy amin'ny 10.7: 1 sy 1: 1, raha ny marina. Amin'ireny soatoavina ireny, takatrareo ankehitriny ny antony mbola ahafahanao mitazam-potsiny amin'ny winstrol ho an'ny vehivavy raha tsy miala amin'i Jay Cutler.
Ahoana no fomba hifidianana mpamatsy poids amin'ny steroids ao amin'ny 12 Dingana
Benefit Winstrol 14: Animal Steroid
Ao amin'ny veterinary, stanozolol (Winstrol / winny) dia mirehareha amin'ny fampiasana fitsaboana marobe ary koa ny steroid anabolic. Tamin'ny voalohany dia tsy natao ho an'ny biby ny endri-tsoratra nampiasaina. Ny olona sasany dia mampiasa ny zava-mahadomelina rehefa doping amin'ny fifaninanana an-tariby na fifaninanana biby hafa.
Benefit Winstrol 15: Speed ​​and Agility
Azonao atao ny manontany tena hoe nahoana ny atleta tsy misy saina no handeha ho an'ny steroid, izay hanangana ny hozatra ihany ary hamela vokatra be dia be. Eny, ny winstrol dia tsy hampitombo ihany ny herinao, fa koa manampy amin'ny fitomboanao ny fahaizanao sy ny hafaingananao amin'ny ankapobeny. Raha ny marina, ireo atleta dia hikarakara ny fahombiazany fa tsy ny maha-lahy azy.
Raha toa isika tokony hiresaka momba ny zava-drehetra winstrol tombony, Mieritreritra aho fa mila boky manontolo isika. Ny tombontsoa hafa dia ny fanamafisana ny dity ny taolana, ny fanamafisana ny tendany sy ny ligaments, ary ny famokarana saribakoly henjana, fa kosa ny vovobony.
Winstrol dia manome anao ny fahafaha-misafidy hifidy eo amin'ny dosa am-bava na mety. Samy manana stanozolôl ny hormonina mivaingana amin'ny C17-aa steroids. Ny fotoana mety hikarakarana ny zava-mahadomelina dia aloha na mandritra ny sakafo.
Amin'ny fomba ofisialy, misy stanozolol amin'ny tablette na ny pilina. Hatramin'ny nipoitra ny antsitranan'i winstrol ka hatramin'ny sivy ora, ianao dia mila maka indroa isan'andro mba hihazonana ny bio fahafahana.
Ny doro am-bava dia miovaova amin'ny 40 sy 80mg. Ny dokotera Winstrol iray dia karazana toe-javatra vitsivitsy toy ny traikefa amin'ny steroids, ny lanjan'ny fandeferana, ary ny zavatra tianao hotratrarina. Mariho fa ny fahagagana amin'ny atiny amin'ny doka ambony dia tsy hahasakana anao fotsiny amin'ny tsy fahita firy.
Amin'ny ankamaroan'ny tranga, Winstrol for sale dia azo alaina ao anaty fonosana na takelaka 10mg na 50mg. Ireo mpampiasa lahy dia afaka mandeha amin'ny doka ambony saingy ny vehivavy dia tokony ho eo ambany.
Ny vehivavy mahazo ny fividianana dosie avo dia tsy tokony hafahana satria izy ireo dia afaka mizara ny pilina ao anaty ampahatelony sy ny fety amin'ny 12.5mg / andro. Mifanohitra amin'izany, ny lehilahy buy Winstrol Ny tabilao 10mg dia mbola azo antoka fa ampiasaina dimy capsules isan'andro.
Raha toa ka misy Winny amin'ny takelaka takelaka, misy marika vitsivitsy ihany koa mamokatra ny zava-mahadomelina ao amin'ny fanjakana mamy. Ny ranom-boankazo dia milky ary manana tsiro matanjaka. Na izany aza, afaka manalavitra ny tsirony ianao amin'ny fanalana sira na misotro amin'ny safidinao.
Raha tianao ny maka tsimokaretina, ny doka tokana winstrol dia hampiato anao mandritra ny ora 24 manaraka. Ny dosage dia mianjera eo anelanelan'ny 50 sy 100mg, arakaraky ny maha-bodibônera pro, mpampiasa iray na mpampiasa iray ianao.
Azonao atao ny manisy tombo-tsoa eo amin'ny vavorona, ny sandry ambony, na ny feny.
5. Winstrol Semi-Life
Ny fiainana andavanandro amin'i Winstrol dia miankina amin'ny karazana dosage ny fandraisana. Ohatra, ny doro am-bava dia manana ny fivelaran'ny 8-9 ora. Ho an'ny fampidirana, ny fe-potoana dia maharitra hatramin'ny ora 24.
Raha misy fitiliana manohitra ny doping, dia ny fahatarana dia telo sy valo herinandro. Ireo tarehimarika ireo dia manondro fa ny winstrol dia tsy mahasoa ny atleta mavitrika satria ny fitsaboana amin'ny rongony dia mandava ny herinandro 2 - 4 aorian'ny famitana ny tsingerina.
Tsy maharitra herinandro maherin'ny enim-bolana ny fe-potoana winstrol. Na izany aza, ireo olona manana traikefa amin'ny fampiasana steroïde dia mbola afaka mandray izany mandritra ny 8 herinandro farafahakeliny. Tsara ny mampihena ny dosage roa herinandro mialoha ny faran'ny vanim-potoana. Na dia mamela efitrano fanafody steroid aza ny zava-mahadomelina, dia tsy tokony hampiasa izany miaraka amin'ny steroids C17-aa.
Raha ny vehivavy dia tokony hihazona isan'andro isan'andro amin'ny 10mg / andro, ny bodybuilders lahy dia tokony handoa 50mg / isan'andro. Na izany aza, ny mpampiasa mpampiasa dia afaka manao 100mg isan'andro raha tsy ao anatin'ny roa herinandro farany amin'ny diabe.
Any amin'ny faran'ny trondro winstrol, tokony hizatra fitsaboana ianao hampihenana ny fahaketrahana sy ny fanakanana hormonina. Na izany na ianao dia manomboka ny fatran'ny testosterone ara-dalàna na ny fahaverezan'ny fihenan'ny voaly azonao mandritra ny enim-bolana. Ny haavon'ny testosterone ambany dia hahatonga anao ho ketraka sy hahatsapa ho malemy.
9. Mandra-paharetana ve no hitrangan'izany?
Stanozolol dia manomboka mitondra fiantraikany avy hatrany rehefa miditra amin'ny tsingerina vaovao ianao. Na izany aza dia misy fiovana hita eo amin'ny herinandro faharoa. Amin'ny andro 14, aoka ho azo antoka ny hiala amin'ny fitaratra amin'ny tsikitsiky hatramin'ny winstrol taloha sy aoriana Ny sary dia hampitony anao.
Tadidio fa ity mpanentana ny hozatra ity dia tsy manome antoka ny vokatra tsara ho an'ny mpampiasa rehetra. Ho an'ny ripaka, ny muscular, ary ny sakaiza, dia mila miasa amin'ny sakafo, ny sakafo ary ny fitondrana fampiharana.
Ireto ny fitrandrahana amin'ny zavatra andrasana mandritra ny herinandro herinandro 6 - 8;
1 Tsy misy fiovana azo tsapain-tanana fa ny vatany kosa dia ho lany rano fanampiny
2 Mahatsikaiky ny fatiantoka maivana amin'ny fahatsaran'ny tanjaka
4 Mihamaro ny vascularity ary ny tanjaka ambony indrindra
6 Ny endriny marevaka tsara sady misy tsiranoka kely sy mampitombo
Jereo ny toro-làlana sasany momba ny fomba ankafizin'ny valin'ny bakteria winstrol;
Miezaha tsy tapaka sy tsy tapaka amin'ny fampiasanao ny harena voajanahary voajanahary
Mandehana ireo mpihinam-bitsika McDonalds sy ireo sakafo mihinana, mamy na sakafo matavy
Mialà amin'ny alikaola raha tsy eo amina famonoan-tena hamono ny atiny ianao
Mahagaga ny aty aminao amin'ny habetsahan'ny rano
Makà sakafo manankarena vitamin C toy ny voankazo voankazo
Mampidira fanatanjahantena ao amin'ny fitondrantenanao
Mitandrema amin'ny legioma maitso
10. Common Winstrol Side Effects
Ny vokatry ny fampiasana Winstrol dia miovaova amin'ny olona iray mankany amin'ny manaraka noho ny fahasamihafan'ny hormona. Ny fanandramana ny tsimokaretina ho an'ny anabolic steroids dia azo antoka toy ny fahafatesana, saingy afaka mampihena ny loza mety hitranga ianao raha tsy mihoatra ny dosage ary mandeha tsikelikely.
Fanafoanana ny testosterone indrindra mandritra ny dingam-pandehan'ny post
Ny fitomboan'ny cholesterol malemy, noho izany, manimba ny loza mety hitera-doza na aretim-po
Fanaintainana vokatry ny fahamaotiana vokatry ny tsy fahampian-tsakafon'ny synovial
Ny famoizam-po taorian'ny tsingerina
Voka-pikarohana tsy ela, izay maharitra mandritra ny efa-tapa-bolana
Famotehana ireo mpampiasa vavy
Fihetseham-ponenana vao haingana
11. Ahoana no hanalavirana ny fiantraikan'ny Winstrol Side
Ampiasao ny famenoana cholesterol
Na dia salama tsara aza ny fonao, dia ataovy izay hahitanao fa misy manao famandrihana matetika. Ny dingana iray manan-danja indrindra dia ny hampiditra ireo mineraly amin'ny kolesterola tsara HDL amin'ny sakafo. Ohatra, ny solika trondro dia anisan'ireo fanampim-pamokarana azo ampiasaina indrindra amin'ny fitantanana ity vokatra winstrol ity.
Hanandratra ny level testosterone anao
Ny testosterone ambany ambany dia mitranga mandritra ny vanim-potoan'ny taom-pilalaovana rehefa tapaka ny famokarana voajanahary ity hormonina ity. Ny fomba azo antoka hiatrehana io fiantraikany io dia amin'ny famenoana ny fitsaboana testosterone sasany ao anatin'ny roa herinandro farany amin'ny diabe.
Fanadiovana ny leviora
Ny fanafody toy ny TUDCA, Liv-52, ny NAC, na ny tsilo ronono dia hiaro ny atiny.
Ny fitsaboana amin'ny alina (PCT)
Amin'ny ankapobeny, ny steroids androgenic sy hormones hafa rehetra dia handray ny herinandro 2 - 3 mba hazava ao amin'ny rafitrao. Amin'ity vanim-potoana ity, tokony handeha amin'ny fitsaboana fitsaboana ianao mba hananganana sy hampiato ny hormonalinao. Ohatra, ny fampiasana ny Nolvadex na clomid dia hamerina ny famokarana testosterone.
Ny faharetan'ny PCT dia miovaova mandritra ny roa ka hatramin'ny efatra herinandro.
12. Fanenjehana an'i Winstrol
Ny fandinihana dia mampiseho fa ny steroïde dia mety hitarika ho amin'ny feketanam-po
Ireo niharam-boinan'ny prostaty sy ny karnôsina
Olona manana fanandramana be loatra amin'ny steroïde
Ankizy sy tanora
13. Ahoana no Buy Winstrol Online
Ny ankamaroan'ny fanjakana dia nandrara ny fampiasana steroide anabolic. Noho izany, sarotra ny mahita winstrol amin'ny fivarotana raha tsy mivezivezy any amin'ny firenen-kafa izay efa nampihatra ny fampiasana azy. Ohatra, any Etazonia, Aostralia, Angletera, ary Kanada, dia manohitra ny lalàna ny tompona na hampiasa na hizara steroid. Na izany aza, ny fanafody dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny ordinatera manan-kery avy amin'ny dokotera.
Noho ny faneriterena azony, ny winstrol dia tsy hita fotsiny tsena mainty. Amin'ny alàlan'ny fivarotana eny ambanivohitra, afaka mahazo izay tadiavinao ianao saingy misy tombony faran'izay haingana amin'ny fandraisana ny vokatra voalohany.
Raiso, ohatra, ny endri-tsoratr'i Winny ao anaty fanjakana iray. Raha tsy misy azy io amin'ny tontolo madio sy mangina, dia mety hisy mikraoba sy aretina ny vahaolana. Noho izany antony izany, tokony hanao fandraisana andraikitra hitadiavana laboratoara ara-dalàna ianao.
Na izany aza, ny fanamarinana ao amin'ny magazay sasany amin'ny aterineto dia mety ho hevitra tsara.
Ny fomba tokana azo antoka hividianana stanozolol misy kalitao mendrika tsara indrindra dia amin'ny alàlan'ny fividianana amin'ny aterineto. Azonao atao ny mividy ny zava-mahadomelina any amin'ireo firenena hafa izay tsy miraharaha ny fandraràna ny steroid, fa toa sarotra izany. Any Meksika, ohatra, ny lalàna mifehy ny fampiasana steroïde anabolic dia tena miavaka amin'ny olom-pireneny.
14. Recipe for Winstrol Powder
Vovon-tany Winstrol 1g 5g
190 Proof Grain Alkohol 31.2ml -
Rano mangatsiaka - 62.5ml
Benzyl alcohol - 3ml (3%)
McMullin, GM., Smith, C., Watkin, GT., Scurr, JH. Ny fahaiza-manaon'ny Fibrinolytic enhancement amin'ny stanozolol amin'ny fitsaboana ny tsy fahampian-tsakafo, Ny gazetiboky aostralianina sy Nouvelle Zélande momba ny fandidiana, Aprily 1991.
Falanga, V., Greenberg, AS, Zhou, L., et al., Fanamafisana ny synthesis Collagen amin'ny stanozolol steroide anabolic, Articles NCBI, Online, Desambra 1998
Bates, PC, Millward, DJ, Chew, LF, Ny fiantraikan'ny Stanazolol steroide anabolic amin'ny fitomboana sy ny proteinina metabolism ao amin'ny Rat, PubMed Publications, Online, September 1987
Rao Isotretinoin (Accutane) ho an'ny akne: Fikarakarana ny akne miaraka amin'ny Isotretinoina
Fanamarihana momba ny Oxymetholone: ​​Ny toro-làlana farany amin'ny Oxymetholone (Anadrol) Rojo Proviron (Mesterolone) amin'ny fambolena, fanafody, ary fitsaboana